Ikhaya lasebusika kufutshane neVäddö Canal eneploti enkulu
ULilla Gåsvik ubonelela ngendawo yokuhlala yokuphumla kufutshane kakhulu neVäddö Kanal eRoslagen kwaye inokuqeshwa ngeveki okanye ixesha elide unyaka wonke. Indlu isanda kulungiswa ngokutsha (ngo-2019), malunga ne-66 sqm enkulu kwaye ibekwe malunga neekhilomitha ezingama-30 kumntla we-Norrtälje kunye ne-1.5 iiyure zokuhamba ukusuka eStockholm, e-Uppsala nase-Arlanda. Isikhululo sebhasi sendawo esikufutshane (SL) simalunga nama-200 m ukusuka endlwini.
Apha udibana ne-idyll enoxolo emaphandleni ukuphumla, ukuqubha kunye nemisebenzi. Kukho unxweme oluncinci olusecaleni komjelo kwaye ehlotyeni kukho isikhephe esincinci sokubheqa (ubuninzi babantu aba-3) onokuboleka ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo. Amathuba amahle okuloba avela emhlabeni kunye neejethi. Amajikijolo kunye nokuvunwa kwamakhowa afumaneka emahlathini angqonge iqhina.
Indlu yindlu yasebusika kwaye inokuqeshwa ngeveki okanye ixesha elide unyaka wonke. Ebusika, kukwakho amathuba amahle okutyibiliza umgama omde kumachibi angekho nzulu kwaye ngamanye amaxesha nakwiCanal yaseVäddö xa kukho umkhenkce olungileyo. Lo mmandla ubonelela ngeendawo ezineenduli kunye nehlathi elidala kwaye ukwalungele ukubaleka okanye ukutyibiliza ekhephini, oko kukuthi, ukutyibiliza ekhephini kumhlaba ongalandelwanga.
Indlu inamagumbi amabini okulala, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala elinesitovu kunye neefestile ezinkulu eziya egadini nasehlathini. Igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nokufudumeza ngaphantsi. Iibhalkhoni ezimbini ezinelanga lasekuseni nangokuhlwa, iindawo zokuhlala, i-barbecue, njl. Indlela encinci yegrabile ikhokelela endlwini kwaye phakathi kwesakhiwo kunye nendlela "enkulu" ihlathi elikhuselayo, elinika indawo engaphazamisekiyo, epholileyo.